गर्मीमा फ्रिजको पानी पिउनु कति स्वस्थकर ? « Jagaran News
Published On : 11 August, 2021 2:53 pm
काठमाडौं । गर्मीमा प्रार्य मानिसहरु चिसो खान रुचाउँछन् । त्यो पानी या अन्य चिज किन नहोस् । अहिलेको मौसममा गर्मीले औडाहा भएपछि चिसो पेय वा फ्रिजको पानी पिउनु सामान्य कुरा पनि हो । फ्रिजमा चिसो पारीएको पानीले तत्काल हामीलाई आनन्द आउँछ ।
तर यसरी पिएको पानी नै हाम्रालागि कालान्तरमा स्वास्थ्य समस्याको कारण बन्न नि सक्छ । के के छ त फ्रिजको चिसो पानी पिउनुको हानी रु आज आमी तपाइलाई यसको बारेमा भन्न गइरहेकाछौं ।
१.चिसो पानी पिउँदा श्वासनलीमा कफ बन्न जान्छ । श्वासनलीको सुरक्षार्थ हुने पत्रमा कफ जम्मा हुँदै जाँदा विभिन्न संक्रमण हुन पुग्छ । यसले घाँटी खराब हुने खतरा बढाउँछ ।
२.मानव शरीरको सामान्य तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियस हुन्छ । जब कुनै चिसो चिज पिइन्छ तब त्यसलाई सामान्य तापक्रममा बदल्न शरीरको ऊर्जा खर्च हुन्छ । खाएको पदार्थ पचाउन र पोषक तत्व शोषणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने ऊर्जा अन्यत्र खर्च हुँदा शरीरलाई पोषक तत्व प्राप्त हुन सक्दैन ।
३. बरफ वा चिसो पानी पिउँदा मुटुको गति कम हुने खतरा पनि रहन्छ । चिसो पानीले ‘भेगस नर्भ’ उत्तेजित पार्छ । भेगस नर्भको काम शरीरको पराधीन कामलाई नियन्त्रित गर्नु हो । यसले मुटुको गति कम गर्न मध्यस्थता गर्छ । चिसो पानीले भेगस नर्भ उत्तेजित पारेपछि मुटुको गति कम हुन थाल्छ ।
४. फ्रिजमा राखिएको अत्यधिक चिसो पानी पिउँदा पाचन प्रक्रियामै बाधा उत्पन्न हुन्छ । चिसो पानीले रक्तबाहिनी नली खुम्चिन पुग्छ । यसले पाचन पक्रिया गति सुस्त बनाउँछ । खाएको कुरा ठीक तरिकाले पाचन भएन भने खानामा भएका पोषक तत्व शरीरले पाउँदैन ।
देशभर आजदेखि भेरोसेलको दोस्रो डोज खोप लगाइने
काठमाडौं , साउन २२ । देशभर आजदेखि कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेलको दोस्रो डोज खोप लगाइने भएको
आज काठमाडौं उपत्यकामा कति संक्रमित थपिए ?
काठमाडौं, साउन २१ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १,०७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
यस्ता छन् लस्सी खानुका फाइदा
काठमाडौं, साउन २१ । अहिले गर्मीयामको सजिन चलीरहेको छ । यो मौसममा प्रार्य धेरैलाई चिसो
सफल भयो झलनाथ खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण
काठमाडौं, साउन २० । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल